FA-ga Oo Xiriirka U Jartay Wariye U Shaqeeya BBC Ka Dib Markii Uu Aflagaadeeyay Liverpool | Laacib.net
FA-ga Oo Xiriirka U Jartay Wariye U Shaqeeya BBC Ka Dib Markii Uu Aflagaadeeyay Liverpool
January 12, 2020 Balaleti 1
Xiriirka kubada cagta Ingariiska ayaa xiriirka u jartay daadihiyaha barnaamijka BBC ka baxa ee MOTDx ka dib markii la baahiyay isagoo aflagaadeynaya Liverpool.
Mitch ayaa ka mid ah daadihiyayaasha barnaamijka ka dul baxay Match of the Day ee MOTDX, wuxuu sidoo kale u qaabilsanaa FA-ga inuu u daadihiyo barnaamijyadooda la xiriira xulka England ee kanaalka ay ku leeyihiin Youtube.
12kii bilood ee ugu danbeysay waxauu wareysi iyo warbixino ka soo duubayay garoonka Wembley iyo xarunta tababarka xulka England ee St George’s Park.
Si kastaba, wargeyska Daily Telegraph ayaa sheegaya in xiriirka kubada cagta Ingariiska uu go’aansaday inuusan shaqaaleysiinin wariyahaan ka dib markii uu soo baxay muuqaal uu ku aflagaadeynayo Liverpool bishii November oo baraha bulshada lagu wadaagay.
Sida wargeyska uu sheegay, Mitch looma isticmaali doono kulamada saaxiibtinimo ee ay England la ciyaareyso Italy iyo Denmark inkastoo FA-ga ay sheegeen inaysan weli go’aan ka gaarin cida u soo tabin doonta labadaas kulan.
Inkastoo uu raaligelin ka bixiyay durbadii uu muuqaalka soo baxay hadana FA-ga ayaa diidan inay halis geliyaan sumcadooda madaama ay dhawaan wajaheen fadeexad dhanka qamaarka la xiriirta.
Muuqaalka oo lagu abahiyay kanaalka Youtube ee Filthy Fellas, wariyaha ayaa ku tilmaamay magaalada Liverpool hoyga saxarada isagoo sidoo kale sheegay in dadka degan aysan garaneyn waxa ay shaqo tahaty.
One response to “FA-ga Oo Xiriirka U Jartay Wariye U Shaqeeya BBC Ka Dib Markii Uu Aflagaadeeyay Liverpool”
Waxaan ahay taageere kooxda LIVERPOOL waxaan daawanaayey ciyaaraha LIVERPOOL in muda ah, waxaan inbadan kudhib qabney 2 arimood una baahnaa in dhab ahaantii xal rasmiya laga gaaro;.
1. Gool haye la’aan iyo daacaf liita
2. In xidigaha waa weyn nagala dafo oo ay qaataan kooxaha tunka weyn sida REAL MADIRD iyo BARCILONA.
Balse hada nasiib wanaag kooxdeenu waa caqliyeysatey waxeyna isku dayeysaa iney xafidato xidigaheeda muhiimka ah, sidoo kalena daafac xumidii iyo GK -kii labaduba waa laxaliyey.